रुघा खोकी र दमको रामबाण उपचार हो अमला, विज्ञबाट थाहा पाउनुहोस् उपयोगका ६ तरिका र फाइदा – Annapurna Daily
On Jun 27, 2021 17,885
एजेन्सी । चिसो मौसममा रुघा, खोकी र दमले धेरैलाई तनावमा पारेको हुन्छ । यसैकारण गुजरातको सूरतमा काम गर्ने डा. दिक्षा भावसार रुघा, खोकी र दम भगाउनका लागि अमलालाई रामबाण उपचार मान्छिन् । डा. दीक्षा एक आयुर्वेदिक डाक्टर हुन् । उनका अनुसार चिसो मौसममा रुघा, खोकी र दमको समस्या हुनेहरुले अमलालाई कुनै पनि रुपमा खान सक्छन् ।
डा. दीक्षाका अनुसार रुघा, खोकी र दमका बिरामीले अमलाको प्रयोग निम्न तरिकाले गर्नुपर्छः अमला पाउडरः डा. दीक्षाका अनुसार रुघा, खोकी र दमको समस्या चिसो समस्यामा अत्यधिक हुन्छ । यसबाट पार पाउनका लागि अमलाको पाउडर बनाउनुहोस् । यो पाउडरमा आधा चम्चा मह मिसाएर बिहान बेलुका खानुहोस् । त्यसपछि मनतातो पानी पिउनुहोस् । महले चिसो मौसममा शरीरलाई तातो राख्छ । तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने अमला खाली पेटमा खानुहोस् । खाली पेटमा अमला खाँदा छिटो फाइदा पुर्याउँछ ।
अमला जुसः जसलाई चिसो मौसममा रुघा, खोकी र दमको समस्या हुन्छ, उनीहरुले अमलाको पाउडरबाहेक जुस पनि पिउन सक्छन् । डा. दीक्षाका अनुसार अमलाको जुस निकालेर तातो पानीसँग बिहान खाली पेटमा खानुहोस् । यसका लागि तपाईं २० देखि २५ मिलिलिटर अमलाको जुस र तातो पानी खानुहोस् । यसमा थोरै बेसार हाल्नुहोस् । अमलाले कफलाई पगालेर बाहिर निकाल्ने काम गर्छ ।